January 2017 - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
မက်ဂနီဆီယမ်ဟာ စတုတ္ထအများဆုံးဓါတ်ဆားဖြစ်တယ်။ လူ့ခန္ဓာကိယ်ထဲမှာ ပရိုဆင်းဓါတ်နဲ့တွဲရှိနေတဲ့ မက်ဂနီဆီယမ် ဓါတ်ဆား စုစုပေါင်း ၃၇၅ဝ ရှိတယ်။ အင်ဇိုင်းမ်ပေါင်း ၃ဝဝ မှာ သူပါမှဖြစ်တယ်။ နည်းနေတာ မကောင်းဘူး။ မက်ဂနီဆီယမ် နည်းရင်ဘာဖြစ်သလဲနဲ့ မက်ဂနီဆီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို ရေးပါမယ် ။
1. Muscle Cramps And Spasms ကြွက်တက်တာ၊ ကြွက်သားနာတာတွေဖြစ်မယ်။
2. Cravings For Chocolate ချောကလက်ကိုအတင်းစားချင်နေမယ်။ (သူများတိုင်းပြည်မှာပါ။)
3. Anxiety စိုးရိမ်စိတ်ကဲနေမယ်။
4. Insomnia အိပ်မရဖြစ်မယ်။
5. Constipation ဝမ်းချုပ်မယ်။
6. High Blood Pressure သွေးတိုးမယ်။
7. Headache And Migraine ခေါင်းကိုက်မယ်။ မိုင်ဂရင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
8. Irregular Heartbeat နှလုံးခန်မူမမှန်ဖြစ်မယ်။
9. Acid Reflux အက်စစ်ဓါတ်အထက်ဆန်မယ်။
1. Brazil Nuts ဘရာဇီးလ်အစေ့အဆံ
2. Halibut ဟယ်လီဗတ် ပင်လယ်ငါး
3. Cocoa ကိုကိုး
4. Rice Bran ဖွဲနု
5. Cashews သီဟိုဠ်စေ့
6. Quinoa ပင်လယ်စာတမျိုး
7. Pumpkin Seeds ဖရုံစေ့
8. Almonds ဗာဒံ (မက်မွန်) စေ့
9. Spinach ဟင်းနုနွယ်ရွက်
သုတေသနက တခြားတိုင်းပြည်မှဖြစ်လို့ သူတို့ဆီကအစားအစာတွေသာပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာစားကြတဲ့ ဖွဲနုနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆီကအစ၊ သွားရည်စာ၊ အစေ့အဆီမျိုးစုံ၊ ဟင်းနုနွယ်လိုအရွက်အရွက်တွေမှာ မက်ဂနီဆီ ယမ်ဓါတ် ပါပါမယ် ။
အသက်ကြီးသူများကို နုပျိုကျန်းမာနေစေမည့် နည်းလမ်း (၂၀ )
အသက်ကြီးတယ်ဆိုတာ လောကဓမ္မတာ တစ်ရပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သင့်အသက်အရွယ်ဟာ သင်ခံစားနေရ တဲ့ နုပျိုငယ်ရွယ်ကျန်းမာတဲ့ စိတ်ခံစားမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ ဆိုလိုတာက အသက်ဘယ်လောက်ပဲ ကြီးလာပါစေ၊ အိုလာပြီလို့ မတွေးတောဘူးဆိုရင် သင်က နုပျိုကျန်းမာနေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ဘဝမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲပါ
အိမ်မှာ ထိုင်နေရတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင် အိုမင်းလာပြီဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထဲမှာထိုင်ပြီး အချိန်ဖြုန်း တာထက် ဘဝမှာ လုပ်စရာရှိတဲ့ တာဝန်တွေ၊ ဝတ္တရားတွေကို ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ငယ်ရွယ်ဖျတ်လတ် တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်စေပါတယ်။
(၂) အိုမင်းခြင်းကြောင့် စိတ်ဓာတ်မကျပါနှင့်
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာမှာကို စိတ်ဓာတ်ကျနေတာက သင့်ကို ပိုမိုအိုမင်းလာစေပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့ အတွက် စိတ်မသက်မသာမဖြစ်ပါနဲ့။
(၃) ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် ကြိုးစားနေထိုင်ပါ
ကျန်းမာရေးကောင်းတာက ငယ်ရွယ်နုပျိုစေတဲ့ ခံစားချက် ကိုရရှိစေတဲ့ အဓိကသော့ချက်ပါ။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်း အောင် နေထိုင်ပါ။
(၄) ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစာစားပါ
အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစာကို စားပေးတာက နုပျိုအသက် ရှည်မှုအတွက် အရေးပါပါတယ်။
လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးဝလံတွေကို စားသုံးနိုင်ပြီး သက်ရှည် ကျန်းမာစေဖို့ ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး စားပင်သီးပင် တွေ စိုက်ပျိုးပါ။ ဥယျာဉ်စိုက်တာက ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို လည်း လုပ်ဖြစ်စေပါတယ်။
(၆) လေ့ကျင့်ခန်း များများလုပ်ပါ
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ငယ်ရွယ်ကျန်းမာမှုကို ရရှိစေတဲ့ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းပါ။ တစ်ပတ်မှာ အနည်းဆုံး ၃-၅ရက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
(၇) မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့် ထိတွေ့ ဆက်ဆံပါ
လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တာက နုပျိုကျန်းမာတဲ့ဘဝကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ များများ အချိန် ဖြုန်းလေလေ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုကို ရရှိလေလေပါပဲ။
(၈) ဝါသနာအသစ်များကို ရှာဖွေပါ
ဝါသနာအသစ်တွေကို ရှာဖွေပြီး လုပ်ဆောင်ပေးတာက ဘဝမှာနေရတာ တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ခံစားရစေပြီး ကျန်းမာရေး ကိုလည်း ပိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
(၉) လက်ရှိ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းအတိုင်း နေထိုင်ပါ
ငယ်ရွယ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုမျိုး ရရှိလိုရင် လူငယ်တွေလို ဝတ် ဆင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အသားအရေကို တင်းရင်းလှပအောင် ပြုပြင်ပြီး လက်ရှိခေတ်စားနေတဲ့ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းနဲ့အညီ ဝတ်စားဆင်ယင်ပါ။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ အသက်ကြီးသူတွေ လို လိုက်ဝတ်ရမယ်လို့ ဘယ်သူမှ သတ်မှတ်မထားပါဘူး။
(၁၀) ဆံပင်ကို ပြုပြင်ပါ
ဆံပင်ကို ပုံစံပြောင်းပြီး ငယ်ရွယ်တဲ့ပုံမျိုးရအောင် ပြုပြင် လိုက်ပါ။ ငြီးငွေ့မှုပါ ပြေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
(၁၁) အသင်းအဖွဲ့ ထဲ ပါဝင်ပါ
စေတနာ့ဝန်ထမ်းအသင်းအဖွဲ့ထဲ ပါဝင်တာက လူမှုဆက်သွယ် ရေးကို ကောင်းမွန်စေပြီး သွက်လက်ဖျတ်လတ်ကာ ကျန်းမာနေ စေပါတယ်။
(၁၂) အားကစားခန်းမနှင့် ဆက်သွယ်ပါ
အားကစားခန်းမနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် တာက သင့်ကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် ကျန်းမာနုပျိုစေပါတယ်။ အားကစားခန်းမ ဟာ သငူ ယခ်ျင်း အသစေ် တနွဲ့ တွေ့ဆနုံ ငို တ်ဲ့ နေရာကောင်း တစခ်ုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၃) အသက်အရွယ် ကန့်သတ်ချက်မရှိသော အရာကို လုပ် ဆောင်ပါ
အသက်အရွယ်ကန့်သတ်ချက်မရှိ လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ဥပမာပြောရရင် မာရသွန်ပြေးတာမျိုးပါ။
(၁၄) မိတ်ဆွေ အသစ်များနှင့် တွေ့ ဆုံပါ
မိတ်ဆွေအသစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံတာက သင်ရဲ့ လူမှုဆက် သွယ်ရေးစက်ဝန်းကို ကျယ်ပြန့်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင်နဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ ခံယူချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်တူတဲ့သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်း ပါ။
(၁၅) နည်းပညာအသစ်များကို လေ့လာပါ
နည်းပညာတွေက အမြဲအသစ်ပေါ်နေပါတယ်။ နည်းပညာ အသစ်တွေကို မသိတော့တာက သင့်စိတ်ထဲမှာ အသက်ကြီး လာပြီလို့ ထင်ရစေတာကြောင့် ခေတ်ပေါ်နည်းပညာအသစ် တွေကို လေ့လာသင့်ပါတယ်။
(၁၆) အိမ်ကို ခေတ်မီအောင် ပြင်ဆင်ပါ
အိမ်ကို ရှေးဟောင်းပုံစံအတိုင်း မထားပါနဲ့။ အိမ်အပြင်အ ဆင်ကို ခေတ်နဲ့အညီ ပြုပြင်တာက သင့်စိတ်ကို နုပျိုလန်းဆန်း စေပါတယ်။
(၁၇) လွတ်လပ်သော စိတ်ရှိပါစေ
သင့်စိတ်ကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပြီး ဝါသနာပါရာ လုပ်ပါ။ ဒါက သင့်ကို ငယ်ရွယ်ပြီး ပေါ့ပါးမှု ရှိစေပါတယ်။
(၁၈) သင်လုပ်နိုင်လျှင် လူငှားမထားပါနှင့်
သင်လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်တွေအတွက် လူငှားထားပြီး မခိုင်း ပါနဲ့။ ကိုယ်ပိုင်မြေကွက်ထဲမှာ မြက်ရိတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘာ သာ လုပ်ဆောင်ပါ။
ငယ်စဉ်က သင်သွားချင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကို သွားနိုင်တဲ့ ငွေ ကြေးရှိရင် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းတုန်း ခရီး သွားလာ ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ပါးပြီး ငယ်ရွယ်နုပျိုစေပါတယ်။
(၂၀) ဘာသာရပ်အသစ်များ လေ့လာပါ
အသက်ကြီးပြီဆိုပြီး လေ့လာစရာ မလိုတော့ဘူးလို့ မထင်ပါ နဲ့။ ဘယ်အရာကိုမှ သင်ယူဖို့ နောက်မကျသေးပါဘူး။ အသက် ကြီးချိန်မှာ စာပေလေ့လာသင်ယူတာက မျှော်လင့်ချက်ကို ဖြစ် ပေါ်စေပြီး နုပျိုတယ်လို့ ထင်ရစေပါတယ်။
လက်ထက်ခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်
(၁) အတူလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖြစ်ခြင်း
ဘဝ အဖော်ရှိတဲ့သူတွေက တစ်ဦးတည်း သမားတွေထက်စကား စမြည်ပြောရင်း လမ်းလျှောက်တဲ့နှုန်း ပိုများပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ သုံးမိုင်လောက် လမ်းလျှောက်ဖြစ်တာကြောင့် ကယ်လိုရီ ၃၀ဝ နီးပါးလောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး လက်ချင်းဆုပ်ကိုင်ပြီး လမ်းလျှောက်တာကြောင့် စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေတဲ့ အန်ဒေါ်ဖင်ဟော်မုန်း၊ ပွေ့ဖက်မှုကြောင့် အောက်ဆီတိုစင်ဟော်မုန်း စတာတွေ ထွက်နှုန်းတိုးစေကာ စိတ်ကျန်းမာရေးကို လည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
(၂) အတူ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချနိုင်ခြင်း
ကိုယ်အလေးချိန်များပြီး အဝလွန်နေရင် အတူကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ဖို့ ရည်မှန်းချက်ထားပေးတာကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်း ပိုမိုလုပ်ဖြစ်ကာ ကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာပါတယ်။
(၃) အမျိုးသမီးကဲ့သို့ စားဖြစ်ခြင်း
အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါ အာဟာရတန်ဖိုးတွေကို ပိုရရှိလေ့ရှိကြပါတယ်။ အိမ်ထောင်မပြုခင်မှာ အမျိုးသားတွေက ဆား၊ သကြားနဲ့ အဆီ တွေကို ပိုမိုစားဖြစ်ကြပြီး အိမ်ထောင်ပြုပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားဖြစ်တယ်လို့ စုံတွဲသုံးထောင်ကို လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ လက်ထပ်ပြီး ၁၀နှစ် အကြာမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ပေါင်မြင့်တက်မှု ရှိတာကို လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သိရပါတယ်။
Pittsburgh တက္ကသိုလ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဆိုင်ရာ သိပ္ပံရဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အသက် ၇၀- ၇၉နှစ်ကြား အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး ၃၀၇၅ ဦးကို လေ့လာခဲ့ရာ ကျန်းမာပြီး တက်ကြွနေတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ ကျန်း မာတက်ကြွတဲ့ ဇနီးသည်ရှိနိုင်ခြေ သုံးဆ ပိုများတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ အမျိုးသားတွေက ဂေါက်သီးကစားတာ၊ တင်းနစ် ရိုက်တာ၊ ပြေးတာ၊ လမ်းလျှောက်တာ စတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ရတာ ပျော်မွေ့တယ်ဆိုရင် ဇနီးသည်တွေအနေနဲ့လည်း ခင်ပွန်းသည်တွေနည်းတူ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖြစ်လို့ပါ။
(၅) စိတ်ဖိစီးမှု လျှော့ချနိုင်ခြင်း
မပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေဟာ ကျန်းမာရေးမကောင်းတတ်ကြပါဘူး။ သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် အိမ်ထောင်သည် ၁၀၅ဦးကို လေ့လာခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပူပင်သောက များတဲ့ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း ကော်တီဇောအဆင့် မြင့်တက်နေပြီး သွေးတိုးတတ်ကြကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာက နှလုံးရော ဂါထတာနဲ့ လေဖြတ်တာတို့ ဖြစ်နိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး ဖိစီးမှုဟာ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ သွားဖုံးရောဂါ၊ အစာအိမ်အနာတို့နဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိ နေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျစေဖို့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အိမ်ထောင်ရေး တည်ဆောက်ပါ။
(၆) အပန်းဖြေခရီး ထွက်ဖြစ်ခြင်း
Pittsburgh စိတ်ကျန်းမာရေး တက္ကသိုလ်လေ့လာသူတွေက ကိုးနှစ်ကြာ နှလုံးရောဂါရှိတဲ့ အမျိုးသား တစ်သောင်း နှစ်ထောင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို လေ့လာခဲ့ရာ နှစ်စဉ် အပန်းဖြေခရီးထွက်တဲ့လူတွေဟာ အပန်းဖြေခရီးမထွက်သူတွေထက် စောစောသေဆုံးနိုင်ခြေ လျော့နည်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်တာက စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျတာ၊ သူငယ်ချင်းမိသားစုတွေနဲ့ အပန်းဖြေနားနေတာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းပိုလုပ်တာစတဲ့ နည်းတွေ လုပ်ဖြစ်စေတာကြောင့် ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) ကျန်းမာရေးကို အလေးထားခြင်း
အိမ်မှာနေတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေက ဟင်းလျာချက်ပြုတ်ရေးကို စီမံတဲ့အပြင် စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျပြီး စိတ်ခံစားမှုမြင့်တက်စေဖို့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို စီစဉ်လေ့ရှိတာကြောင့် မိသားစုဝင်အားလုံး ကျန်းမာနေတတ်ကြပါတယ်။ ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာ မှုတစ်ခုအရ ဇနီးသည်က အပြင်ထွက်ပြီး အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ရင် ခင်ပွန်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအဆင့်က ၂၅ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျမှုရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၈) တတ်နိုင်သလောက် လေ့လာဖြစ်ခြင်း
ကျန်းမာအောင် နေဖို့ရာအတွက် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့် တယ်ဆိုတာ အမြဲလေ့လာသင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာဖို့အတွက် အခြေခံကျတဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ တစ်နေ့ မိနစ် ၃၀ လှုပ်ရှားဖြစ်အောင် ကြိုးစား၊ အစာကို ပုံမှန်စား၊ သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အ ခွံချွတ်မထားတဲ့ ကောက်နှံစာနဲ့ အဆီ နည်းအသားကိုစား၊ အိပ်ရေးဝ၀အိပ်၊ အ ကောင်းမြင်တဲ့ စိတ်ထား၊ လိုအပ်တဲ့ ဖြည့် စွက်ဆေးကို မှီဝဲ စတဲ့နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေကို ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးစလုံး လိုက်နာနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေးသာယာပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြမှာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါ တယ။်
သွေးကင်ဆာရောဂါအား ဗီဇတည်းဖြတ်ထားသော ဆဲလ်ကုထုံးကို စမ်းသပ်အောင်မြင်
ဗြိတိန်ဆရာဝန်များသည် လူကီးမီးယားသွေးကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေရသော မွေးကင်းစကလေးငယ်လေး နှစ်ဦးအား အလှူရှင်တစ်ဦး၏ဆဲလ်အား ဗီဇတည်းဖြတ်ကာ အစားထိုးအသုံးပြုသည့်ကုထုံးဖြင့်ကိုစမ်းသပ် ခဲ့ရာ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ၄င်းကုထုံးဖြင့် လူကီးမီးယားသွေးကင်ဆာရောဂါကုသမှုကို ယခုနှစ် အတွင်း စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်မှန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုမှာ ကလေးငယ် ၂-ဦးတည်းနှင့်ဖြစ်သည့်အတွက် ကျဉ်းမြောင်းလှပြီး ၄င်းကလေးငယ် ၂-ဦး လူကီးမီးယားဝေဒနာပျောက်ကင်းသက်သာသွားသည်မှာလည်း ၁၆ လနှင့် ၁၈ လ အသီးသီးသာ ရှိနေ သေးသည့်အတွက် ကုထုံးအောင်မြင်သည်ဟုထုတ်ပြန်ကြေညာရန် အချိန်စောလွန်းနေသေးပြီး အချက် အလက်များသည်လည်း လုံလောက်မှုမရှိသေးကြောင်း၊ ကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေရသူတစ်ဦးသည် နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ ဝေဒနာကိုပြန်လည်ခံစားရခြင်းမရှိမှသာ ကင်ဆာပျောက်ကင်းသွားသည်ဟုဆိုနိုင် မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ သော် ဤစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ခြင်းက ဆဲလ်ဗီဇတည်းဖြတ်ကုထုံး၏ အနာဂါတ် သေချာခိုင်မာနေသည်ကို ထင်ရှားစွာရည်ညွှန်းထောက်ပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း သုတေသီများက ယူဆ ကြောင်း သိရသည်။
ကင်ဆာလောကမှာ ဆဲလ်ဗီဇတည်းဖြတ်ကုထုံးက တစ်နေ့ နေ့ တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် အာမခံချက်ရှိတဲ့ကုထုံး တစ်ရပ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကနဦးစမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့ ကုထုံး အောင်မြင်မှုက အကန့် အသတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်းအကန့် အသတ်တွေရှိနေဆဲပါပဲ။ တစ်ကမ္ဘာလုံး အနှံ့ မှာ ကင်ဆာရောဂါတိုင်းအတွက် ယူနီဗာဆယ်ကုထုံးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့လုပ်စရာတွေ အများကြီး ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်က မဝေးတော့ပါဘူး။ ဒီနှစ်အတွင်းမှာကို သတင်းကောင်း တစ်ခု ကျွန်တော်တို့ ပါးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ဟု သုတေသီတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ဆဲလ်ဗီဇတည်းဖြတ်ကုထုံးအား ဗြိတိန်အပြင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ တွင် စမ်းသပ် လျက်ရှိကြောင်း၊ ၄င်းကုထုံးတွင် လူနာ၏သွေးထဲမှ T Cell အချို့ ကိုဖယ်ထုတ်ကာ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲတွင် အထူးဆဲလ်များဖြစ်သွားအောင်ပြောင်းလဲပေးကြောင်း၊ ထို့ နောက် ၄င်းဆဲလ်များကို လူနာ၏သွေးထဲ သို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပြုပြင်ပြီးဆဲလ်များက ကင်ဆာဆဲလ်များကို ရှာဖွေတိုက်ခိုက်သုတ် သင် ရှင်းလင်းပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမေ၇ိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဆဲလ်ဗီဇတည်းဖြတ်ကုထုံးကိုစမ်းသပ်မှုမှာ အဆင့် ၂ သို့ ရောက် ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၊ Novartis နှင့်အခြားသောဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအချို့ က ၄င်းကုထုံးကို ယခုနှစ် အစောပိုင်းတွင်စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း ၊ သွေးကင်ဆာရောဂါကို ခံစားနေရသော ကလေးငယ်များတွင် ဤကုထုံးကိုစမ်းသပ်မှုအကြိမ်ကြိမ်အောင်မြင်နေပြီဖြစ်၍ များမကြာမီ လူကီးမီးယားကင်ဆာကို ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်မည့်အလင်းရောင်ခြည်သမ်းလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် အခါးအရသာသိရှိမှု လျော့နည်းနိုင်
ဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့် ဆေးလိပ်ဖြတ်ထားပြီးစ လူများသည် ခါးစိမ့်သည့် အရသာကို ခံစားမှု လျော့နည်းသောကြောင့် ကော်ဖီ ၊ လက်ဖက်ရည်ကဲ့သို့ အရသာကို အပြည့်အ၀ ရနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည် ။ ပြင်သစ်အခြေစိုက် Pitie-Salp etriere ဆေးရုံမှ သုတေသီ Nelly Jacob ဦးဆောင်သောအဖွဲ့က အဆိုပါ လေ့လာမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Chesmokerensory Perception ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲခြင်းသည် အရသာခံစားမှုကို ကျဆင်းစေသည် ။ လျှာ၏ အရသာခံအဖုများ တည်ရှိရာ fungi form papillae အစိတ်အပိုင်းများ၏ တည်ဆောက်ပုံ ကို ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက ပြောင်းလဲစေသည် ။ သို့သော် ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှု ရပ်ဆိုင်းသည်နှင့် အရသာခံစားနိုင်မှု မူလအတိုင်းပြန်ရနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ၊ အရသာ ပြန်လည်ခံစားရရန် ကြာချိန်တို့ကို မသိရှိနိုင်သေးပေ။
သုတေသနတွင် Paris အခြေစိုက်ဆေးရုံများမှ ၀န်ထမ်း (၄၅၁) ဦးကို အချို ၊ အချဉ် ၊ အခါးနှင့် အငန် အရသာ လေးမျိုးခံစားနိုင်မှုစွမ်းရည်နှင့် အရသာတစ်ခုချင်းစီခံစားနိုင်သည့် အတိုင်းအတာကို စမ်းသပ်ခဲ့သည် ။ဆေးလိပ်သောက်သူ၊ ဆေးလိပ်မသောက်သူနှင့် ဆေးလိပ်ဖြတ်ထားစ ပုဂ္ဂိုလ်များဟူ၍ အုပ်စုခွဲကာ သုံးနှစ်ကြာလေ့လာခဲ့သည် ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် အငန်၊ အချိုနှင့် အချဉ်အရသာ ခံစားနိုင်မှုစွမ်းရည်များကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ အခါးအရသာ ခံစား နိုင်စွမ်းကျ ဆင်းစေသည်ကို တွေ့ရ သည်။ လျှာ၏အခါးအာရုံခံ အစိတ်အပိုင်းများသည် အခါးအရသာ အလွန်နည်းပါးသည့် အချိန်၌ပင် ခံစားသိရှိနိုင်သော်လည်း ဆေးလိပ် သောက်သူငါးဦးတွင် တစ်ဦးမှာ အခါးအရသာ ခံစားနိုင်စွမ်း ကျဆင်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌ ဆေးရွက်ကြီး အကြွင်းအကျန်များ၊ ဆေးရွက်ကြီး လောင်ကျွမ်းမှုမှ ကျန်ရှိနေသော ပစ္စည်းများ သည်လည်း အရသာ အာရုံခံအစိတ်အပိုင်းများ ပြန်လည်ပြု ပြင်မှုကို အနှောင့်အယှက်ပေး သည်ဟု သုတေသီများက ယူဆကြသည် ။
(အရက်သောက်သူတွေကို သတိပေးအပ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သူက သူ့ဘေး ၆ ပေပတ်လည်ကို သာ ရောဂါ ရစေနိုင်တယ် ။ အရက်ကတော့ သောက်တဲ့သူသာမက မိသားစုနဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကိုပါ ဒုက္ခအကြီးအကျယ် ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆေးပညာစာရေးရင် ခြောက်လှန့်ချဲ့ မရေးပါ ။ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတွေ မကြာခဏလာတယ်။ ဆောရီး။)
ဆရာရှင့် ကျွန်မအဖေက အသက် ၆၃ နှစ်ပါ။ အရင်ကအရက်သောက်လို့ အသည်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုကျွန်မတို့ မိသားစုကိုလဲ မမှတ်မိပါဘူး။ တချိန်လုံးအရူးတယောက်လိုလမ်းလျောက်နေပါတယ်။ တခါတလေ သူငယ်ပြန်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့လဲ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိလို့ သူပျောက်မှာ စိုးတာကြောင့် နောက်က လိုက်နေရပါတယ်ဆရာ ။ ကျွန်မတို့က့့ မြို့မှာနေတာပါဆရာ ။ တချို့က အဲ့ရောဂါက ကုလဲမပျောက်ဘူးပြောလို့ ကုလို့ရ မရသိချင်ပါတယ် ။ ဒီမှာ ဆရာဝန်နဲ့ပြတော့ မသက်သာလို့ပါဆရာ ။ ဆရာကျန်းမာပါစေ ။
အသည်းခြောက်ရောဂါဟာ တနည်းနည်းကြောင့် နာတာရှည်အသည်းရောဂါဖြစ်ပြီးနောက် ဆက်ဖြစ်လာ တာဖြစ်တယ် ။ အသည်းရောင် စီ၊ အသည်းရောင် ဘီ၊ အရက်စွဲရောဂါ နဲ့ အရက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အသည်းအဆီဖုံးသူတွေကနေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ တခြားအကြောင်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဖြစ်လာရင် အသည်းက လိုသလောက်နဲ့ လိုသလို မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖျင်းစွဲမယ်၊ အစာလမ်းကနေ သွေးယိုမယ်၊ အသားဝါမယ်၊ ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်မယ်၊ ကျောက်ကပ်၊ အဆုပ်ထိခိုက်မယ်၊ အသည်းကင်ဆာ ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖြစ်လာရင် ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းတရားကို ကုသရမယ် ။ ဆက်ဖြစ်လာတာတွေကို ကုသရမယ်။ တိုးမလာအောင် ဆင်ခြင်ရမယ် ။ အသည်းခြောက်နေပြီဆိုတာ ရောဂါရှေ့ရောက်တာဖြစ်တယ်။ အသည်းမှာ အမာရွတ်တွေနဲ့ အဖုအသီးလေးတွေ ရောဖြစ်နေတယ်။ ပြောင်းသွားတဲ့ အသည်းနေရာက သူ့အလုပ်သူ မလုပ်နိုင်တော့ပါ။ တချိန်မှာ အသည်းအစားထိုးရမယ် ။
ခံစားရမှာတွေက အသည်း (ဆဲလ်) တွေ အလုပ်မလုပ်တော့လို့ဖြစ်ရတဲ့ တိုက်ရိုက်ဖြစ်လာတာတွေနဲ့ အစာလမ်းကြောင်း သွေးလှည့်စနစ်ချို့ယွင်းလို့ ဖြစ်တာတွေကို စုပေါင်းပြီး ခံစားရလိမ့်မယ်။
• Palmar erythema (အီစထိုဂျင်း) ဟော်မုန်း များလာလို့ လက်ဝါးမှာ နီမြန်းနေတာနဲ့ ရင်သား ကြီးလာတာ၊
• အသည်းအရွယ်အစား ကြီးနိုင် သေးနိုင်တယ်။
• Fetor hepaticus အသက်ရှူထုတ်တာမှာ dimethyl sulfide (ဆာလ်ဖါနံ့) ထွက်နေမယ်၊
• နှလုံးကို နားကြပ်နဲ့နားထောင်ရင် (ရင်ခေါင်းနေရာမှာ) အသံတမျိုးကြားရမယ်။
• ဦးနှောက်ထိခိုက်တာကို (ပရိုတင်း) လျှော့စားစေရတယ်။
ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင့် သမီးအမေက အသက် ၆၁ နှစ်ပါ ။ ကွမ်းလည်းစားပါတယ် ။ အခု အမေက သားအိမ်ကျလို့ဆိုပြီး ဆေးခန်းသွားပြတာပါ ။ ဗိုက်တောင့်တောင့်နေလို့ဆိုပြီး ဆရာမက အသည်း ကို Ultrasound ရိုက်ခိုင်းပါတယ်။ အသည်းခြောက်တယ်လို့ ပြောပါတယ် ။ အမေက ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးလည်း ထိုးထားပါတယ် ။ အမေ့ Ultrasound အဖြေကိုလည်းဆရာကြည့်နိုင်အောင် ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့် သမီးသိချင်တာ အသည်းခြောက်တာ အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်လာနိုင်လား ။ သက်တမ်းစေ့နေနိုင်ပါသလား ။ သက်တမ်းစေ့နေနိုင်အောင် ဘာတွေများ ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်ကို သိချင်ပါတယ်ရှင့် ။
အသည်းခြောက်ရောဂါဟာ တနည်းနည်းကြောင့် နာတာရှည်အသည်းရောဂါဖြစ်ပြီးနောက် ဆက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် ။ အသည်းရောင် စီ၊ အသည်းရောင် ဘီ၊ အရက်စွဲရောဂါ နဲ့ အရက်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အသည်းအဆီဖုံးသူတွေကနေ ဖြစ်လာနိုင်တယ် ။ တခြားအကြောင်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ် ။ ဖြစ်လာရင် အသည်းက လိုသလောက်နဲ့ လိုသလို မလုပ်နိုင်တော့ဘူး ။ နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖျင်းစွဲမယ်၊ အစာလမ်းကနေ သွေးယိုမယ်၊ အသားဝါမယ်၊ ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်မယ်၊ ကျောက်ကပ်၊ အဆုပ်ထိခိုက်မယ် ၊ အသည်းကင်ဆာ ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ် ။ ဖြစ်လာရင် ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းတရားကို ကုသရမယ် ။ ဆက်ဖြစ်လာတာတွေကို ကုသရမယ်။ တိုးမလာအောင် ဆင်ခြင်ရမယ် ။ အသည်းခြောက်နေပြီဆိုတာ ရောဂါရှေ့ရောက်တာဖြစ်တယ် ။ အသည်းမှာ အမာရွတ်တွေနဲ့ အဖုအသီးလေးတွေ ရောဖြစ်နေတယ် ။ ပြောင်းသွားတဲ့ အသည်းနေရာက သူ့အလုပ်သူ မလုပ်နိုင်တော့ပါ ။ တချိန်မှာ အသည်းအစားထိုးရမယ် ။
ခံစားရမှာတွေက အသည်း (ဆဲလ်) တွေ အလုပ်မလုပ်တော့လို့ဖြစ်ရတဲ့ တိုက်ရိုက်ဖြစ်လာတာတွေနဲ့ အစာလမ်းကြောင်း သွေးလှည့်စနစ်ချို့ယွင်းလို့ ဖြစ်တာတွေကို စုပေါင်းပြီး ခံစားရလိမ့်မယ် ။
• Spider angiomata or spider nevi အရေပြားပေါ်မှာ သွေးကြောလေးတွေက ပင့်ကူးအိမ်လိုဖြစ်တာ ၊
• Palmar erythema (အီစထိုဂျင်း) ဟော်မုန်း များလာလို့ လက်ဝါးမှာ နီမြန်းနေတာနဲ့ ရင်သား ကြီးလာတာ ၊
“ခွဲမွေးတာဟာ မိခင်အချို့ အတွက် အကောင်းဆုံး မွေးဖွားနည်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သလို ရံဖန်ရံခါ အသက်ကယ်ဖို့အတွက် ခွဲမွေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခွဲမွေးခြင်းကြောင့် ရေရှည်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကို နားလည်ထားဖို့ လိုသလို ခွဲမွေးဖို့စဉ်းစားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုလည်း သတင်း အချက် အလက် အစုံ အလင် ပြောပြထားပြီးမှ ခွဲမွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခိုင်းသင့်ပါတယ်”ဟု ဦးဆောင်သူ သုတေသီ ပါမောက္ခ Neena Mod ကဆိုသည်။
PLOS ONE ဂျာနယ်၌ ဖော် ပြခဲ့သော အဆိုပါသုတေသနတွင် ခွဲစိတ်၍ မီးဖွားသူမိခင် (၃၈၀၀၀)ဦး ကို လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည် ။ ထိုမိခင်များမှ မွေးဖွားလာသူကလေးများ၏ ပျှမ်းမျှ ခန္ဓာကိုယ် ထုထည် အညွှန်းကိန်း (Body Mass Index – BMI) သည် သဘာဝအတိုင်းမွေးဖွားလာသူများ ထက်0.5 kg/m2 ပိုများနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ခွဲစိတ်၍ မွေးဖွားထားသူများသည် ကိုယ်အလေးချိန်လွန်ကဲရန် (၂၉)ရာခိုင်နှုန်း ၊ အ၀လွန်ရန် (၂၂)ရာခိုင်နှုန်း အန္တရာယ်ပိုမိုမြင့်မားလျက်ရှိသည် ။
“အူထဲမှာရှိတဲ့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေဟာ ခွဲမွေးတဲ့ကလေး နှင့် သဘာဝ အတိုင်း မွေးဖွားတဲ့ ကလေးတွေမှာ အမျိုးအစားမတူပါဘူး ။ သဘာဝအတိုင်းမွေးဖွားစဉ် ကလေးငယ်ကို မွေးလမ်းကြောင်း တစ်လျှောက် ဖိညှစ်ထားမှုကြောင့် မျိုးဗီဇ တချို့ သတ္တိကြွလာပြီး ဇီဝဖြစ်စဉ်များစတင် လည်ပတ် လာလေ့ရှိပါတယ် ”ဟု သုတေသီ Matthew Hyd ကဆိုသည် ။
ခွဲစိတ်မီးဖွားခြင်းနှင့် ကလေးငယ်အရွယ်ရောက်ချိန်၌ အ၀လွန်လာခြင်းတို့ ဆက်စပ်မှုသည် ကလေးငယ်၏ ဇီဝဖြစ်စဉ်များ အပြည့်အ၀ အလုပ်မလုပ်ခြင်းကြောင့်သော်လည်း ကောင်း ၊ အူလမ်းကြောင်း အတွင်း အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား မစုံလင် ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင် သည်ဟု သုတေသီများ က ကောက်ချက်ချ ထားသည် ။
Pantoprazole (ပန်တိုပရာဇိုးလ်) ဆေးဟာ လူသုံးများတယ် ။ Proton pump inhibitors အမျိုးအစားဆေးဖြစ်တယ် ။ အစာအိမ်လေနာ ၊ အူသိမ်အစပိုင်းလေနာ ၊ အစာမျိုပြွန်ကနေ အစာခြေရည် အထက်ဆန်တာအတွက်ပေးတယ် ။ အစာအိမ်က အက်စစ်ရည် ထွက်တာကို နည်းစေတယ် ။ ရင်ပူတာ သက်သာစေမယ် ။ အစာမျိုခက်တာနဲ့ မပြတ်တမ်း ချောင်းဆိုးနေတာ အတွက်ပါ ပေးနိုင်တယ် ။ ဆေးနာမည်အမျိုးမျိုးရှိတယ် ။ Pantocid 40 နာမည်နဲ့လည်းလာတယ် ။
• Gastric ulcer အစာအိမ်လေနာအတွက် 40 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၄-၈ ပတ်။
• Reflux oesophagitis အစာခြေရည်အထက်ဆန်လို့ရောင်တာတာအတွက် 40 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၄-၈ ပတ်။
• Gastro-oesophageal reflux disease (GERD) အစာခြေရည်အထက်ဆန်တာအတွက် 20 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၄ ပတ်။ လိုသေးရင် နောက်ထပ် ၄ ပတ်။
ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုတွေကတော့ ခေါင်းကိုက်၊ ဝမ်းပျက်၊ ပျို့-အန်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ သွေးဖြူဥနည်း၊ သွေးမှုံနည်းတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တာရှည် (၃ နှစ်ကြာ) သောက်ရင် ဗီတာမင် ဘီ-၁၂ နည်းစေတတ်တယ်။ အဲတာနည်းရင် အားနည်းမယ်။ လျှာအနာပေါက်မယ်။ ခြေလက်ထုံမယ်။
နံနက်ခင်း နေရောင်ခြည်က ကိုယ်ခန္ဓာ ကျစ်လျစ်လှပစေနိုင်
နံနက်စောစောမှာ နေရဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ ထိတွေ့ခြင်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာ ကျစ်လျစ် လှပစေကြောင်း လေ့လာမှု တစ်ရပ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ် ။ နံနက်ခင်းအချိန်မှာအလင်းရောင်နဲ့ ထိတွေ့တဲ့ ကြိမ်ရေ ၊ ပမာဏနဲ့ အချိန်ကာလဟာ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ဆက်စပ်နေကြောင်းကို ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
လေ့လာမှုခေါင်းဆောင် Phyllis Zee က ““အလင်းရောင်ဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်တွင်း ဇီဝနာရီကို ချိန်ညှိအပေးနိုင်ဆုံး ညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါတယ် ။ အလင်းရောင်နဲ့ ထိတွေ့ ခြင်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ မနက်ခင်းနေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့ ခြင်းဟာ စွမ်းအင်လိုအပ်မှုနဲ့ သုံးစွဲမှုတွေကိုပါ ညီမျှစေပါတာကြောင့် မနက်ခင်းအလင်းရောင်နဲ့ မိနစ် ၂၀မှ နာရီဝက်လောက် ထိတွေ့ပေးခြင်းဟာ ကိုယ်အလေးချိန်အညွှန်းကိန်းကို ပုံမှန်အခြေအနေမှာ ရှိနေစေပါတယ်””လို့ ရှင်းပြထားပါတယ်။
မနက်ခင်းအလင်းရောင်နဲ့ ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ အိပ်စက်နေသူများအဖို့ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ဇီဝနာရီကို ချိန်ကိုက်ညီစေခြင်း (synchronize) မဖြစ်တော့ဘဲ အ၀လွန်လာနိုင်ကြောင်း Phyllis Zee က သုံးသပ်ထားပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုကို Journal PLOS ONE မှာဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သရက်သီးဆိုတဲ့ သစ်သီးဟာ မကြိုက်တဲ့သူ အလွန်ရှားပါးပြီး အ နောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ သစ်သီးတို့ ရဲ့ဘုရင်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ သရက် သီးမှာ ဗီတာမင်အေနဲ့စီအပြင် သတ္ထု ဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့ ဖော့စဖရပ်၊ ကယ်
လစီယမ်နဲ့ ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်တွေလဲြွကယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ သရက်သီး ကိုပေါများစွာစိုက်ပျိုးထွက်ရှိတဲ့ ဒေသတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မလေးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သရက်သီးရဲ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးမှုလေးတွေကို ဖော် ပြပေးပါ့မယ်။
၁။ အဆီနဲ့သွေးအချိုဓာတ်ကို ထိန်း ညှိပေးပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ သရက်သီးမှာ ဇီဝလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ် တွေကို မြန်ဆန်စေတဲ့ သဘာဝပစ္စည်း တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ သရက်သီးဟာ အဆီကျဆေးတွေမှာ
ပါဝင်တဲ့အာနိ သင်နဲ့ အလားတူပါတယ်။ နောက်ပြီး သရက်သီးဟာ leptin ဟော်မုန်း တွေကိုနည်းပါးစေတဲ့အတွက်အဆီ တွေဇီဝဖြစ်ပျက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါ် ပေါက်ခြင်းကိုနှေးကွေးစေတာဖြစ်ပါ တယ်။
အစာစားချင်စိတ်ကိုလည်း နည်းပါးစေပါတယ်။နောက်ပြီး သွေး တွင်းဂလူးကို့စ်တွေကိုလည်း ထိန်းညှိ ပေးနိုင်ပါတယ်။
၂။ သရက်သီးမှာ ပိုတက်ဆီယမ် ပါဝင်မှုများပြားတဲ့အတွက် နှလုံးခုန် သံစည်းချက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး သွေး ပေါင်ချိန်ကို ထိန်းထားပေးပါတယ်။
၃။ ကင်ဆာရောဂါတွေကို ကာကွယ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ လတ်လတ်ဆတ် ဆတ်သရက်သီးတွေမှာပါဝင်တဲ့ ပေါ်လီဖီနော်ဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ကို သတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စဉ် တွေကို
တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်နေတဲ့အ တွက် သွေးကင်ဆာ၊ဆီးကျိတ်ကင် ဆာနဲ့ အူမကြီးကင်ဆာတွေကို ကာ ကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ ခုခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါ တယ်။ ဗီတာမင်စီနဲ့ ဗီတာမင်အေတွေ ပါဝင်မှု မြင့်မားတဲ့အတွက် ခုခံအား စနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။
၅။ သရက်သီးမှာပါဝင်တဲ့ အမျှင် ဓာတ်တွေ၊ အင်ဇိုင်းတွေဟာ အစာ ခြေခြင်းကို မြန်ဆန်စေပြီး ကိုယ်ခန္ဓာ အပူချိန်ကိုလည်း မျှတစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလိုပူပြင်းနေတဲ့ အချိန် မှာသရက်သီးဖျော်ရည် အေးအေး လေး
သောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သရက်သီးစိမ်းကတော့ နေပူလောင် ခြင်းကို တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။
၆။သရက်သီးမှာ ဗီတာမင် B6 ပါဝင် မှုကအာရုံကြောတွေကနေ ဦးနှောက် ကို ပို့ဆောင်ပေးတဲ့စနစ်ကို ပိုမိုလျှင် မြန်စေပါတယ်။
၇။ သရက်သီးမှာပါဝင်တဲ့ သတ္ထု ဓာတ်တွေဟာ သွေးနီဥဆဲလ်တွေ ထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင် ပါတယ်။
လိင်အသားပေး ဇာတ်ကားများ အလွန့်အကျွံကြည့်ခြင်းက ဦးနှောက်သေးကွေးလာစေနိုင်
ဂျာမန်သုတေသီများဟာ လိင်အသားပေးဇာတ်ကား porn တွေကို ကြည့်ရှုမှုများတဲ့သူတွေဟာ ဦးနှောက်အရွယ်အစား သေးလာနိုင်တယ်လို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
““မိမိတို့လေ့လာမှုမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ subcortical အပိုင်းရဲ့ ညာဖက်မှာ တည်ရှိတဲ့ မီးခိုးရောင် ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်း (grey matter) ဟာ လိင်ဇာတ်ကားတွေ အလွန်အကျွံ ကြည့်သူတွေမှာ ကျုံ့လာတာကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်”” လို့ လေ့လာမှု ခေါင်းဆောင် ဂျာမနီနိုင်ငံ ၊ Max Planck လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အင်စတီကျူမှ Simone Kohnှ က ရှင်းပြထားပါတယ် ။ လိင်အသားပေး ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ဦးနှောက်အပေါ် သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်၂၀ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်အတွင်းရှိ အမျိုးသား ၆၄ ဦးကို ဇာတ်ကားကြည့်ရှုမှု အမူအကျင့်များကို မေးမြန်းခဲ့တဲ့အပြင် ယင်းတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကိုလည်း MRI အသုံးပြုပြီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ် ။
တွေ့ရှိလာမှုအရတော့ လိင်အသားပေး ဇာတ်ကားတွေ ကြည့်ရှုမှုများတဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ ဦးနှောက်အရွယ်အစားသေးငယ်လာပြီး အိမ်ထောင်သည်များမှာ ချစ်တင်းနှောတဲ့အခါ
စိတ်ပါဝင်စားမှုနည်းပါးလာတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီလေ့လာမှုကို Journal JAMA Psychiatry မှာ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
''ရွှေဘိုသနပ်ခါးတုံးများ... ရန်ကုန်လိမ်းဖို့ယူ၊ ဘယ်လိုအသားမည်းမည်း...ဝါဝါညက်ညက်ဖြူ...
ပုဇွန်တောင် ကြည့်မြင်တိုင်သူနဲ့ မန္တလေးမြို့တော်သူ...ရွှေဘိုသနပ်ခါးလိမ်းကြရင်ဖြင့် စိမ်းစိမ်း ညက် ညက်ဖြူဖြူ ကြံကြံဖန်ဖန် ရန်ကုန်သူ မန္တလာမြင့်တို့ ရန်ကုန်သူ၊ မန္တလေးသွားလို့ အသား မည်းပြန် သတဲ့ဆူ ''နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်ရေးသား၍ အဆိုတော် မန္တလာမြင့် သီဆိုခဲ့သော ''ရွှေဘိုသနပ်ခါး''အမည်ရှိ သီချင်းကို နားထဲတွင် ပြန်လည်ကြားယောင်မိသည်။ မိန်းကလေး တို့၏ သဘာဝအလှကို ဖွဲ့ဆို ထားခြင်းဖြစ်သည် ။ ပါးပြင်နှစ်ဖက်တွင် သနပ်ခါးတင်ကာ ပါးကွက် ထူထူလေးနှင့် ဟန်မူပိုသော မိန်းကလေး၏ မျက်နှာသည် နဂိုရုပ်မချောသော်လည်း သနပ်ခါး ရနံ့ သင်းပျံ့ပျံ့က အနံ့မွှေးကြူ တလူလူရှိ၍ ယဉ်စစအလှကို မြင်ရသူက ဘဝင်ကျအောင် လှလိုက်တာဟု ထင်မှတ် သွားရပေသည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ် စာဆိုတော် တစ်ဦးကလည်း သနပ်ခါးခြယ်သ၍ အသွင်သဏ္ဌာန် လှလာသည့် မိန်းမပျိုလေး၏ အလှကို စာစီကာခြယ်မှုန်း ပြထားသည်။ ''ဥမ္မာဒန်သနပ်ခါး၊ မြတ်ပါးသို့ခြယ်လျှင်၊ နတ်အလားလို့ တကယ်ထင်မယ် ၊ အရွယ်ပင်ငယ်ရ၊ တော်ကနုပန်း ကြာငုံလို၊ ဂန္ဓာရုံထူးတတ်နိုင်မျှ၊ အဆင်းတော်အင်္ဂါမှာ၊ ကဉ္စနာဟန်ပ မင်္ဂလာလျှံကြွလို့ ၊ အနန္တကျက်သရေ၊ ခြယ်သသူနုအသား၊ စုဖုရားယိုး မှတ် လောက်ပေ၊ မိုးနတ်ခြောက် ဝတိံမြေဝယ်၊ ဣနြေ္ဒထည်လှတဲ့နတ်မယ်လျဘရဏီ၊ ငေးရှုရသည်၊ ပြိုင်လိုက်တိုင်းဘက်မမီတယ် ၊ မျက်နှာချီခေါင်ချုပ်မို့လေး...''သနပ်ခါး လူးလိုက်သည့်အတွက် အရွယ်နုပျိုကာ အသားအရေ စင်ကြယ်ဝါဝင်း ကြည်လင်သည်။ နှိုင်းယှဉ်၍ မရသော အလှ ပိုင်ရှင်ကို နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်မှ အလှကြွယ်ကြွယ် ဣနြေ္ဒထည်လှသည် ဆိုသော နတ်သမီး လေးပင် ငေးမောကြည့်ရှုရသည်။ သနပ်ခါးလူး၍ အလှကြီး လှနေသူလေးမှာ မိမိအလှကို မာန်ကိုးကာ ခေါင်းမော့ပြီး အလှမာန် တက်နေမည်ဖြစ်သည်။ သနပ်ခါးသည် မိန်းကလေးများ အတွက် ခြယ်သကာ လူးဖို့ရန်သက်သက် မဟုတ်ပေ။ လူတို့အတွက် ဆေးဖက်ဝင်သော နံ့သာမျိုး တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သနပ်ခါး၏တန်ဖိုးကို မသိတတ်ကြ၍ အနောက် နိုင်ငံများတွင် အသုံးချပစ္စည်း အလှအပ ခြယ်သရာတွင် အသုံးပြုလေ့ မရှိကြ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ယခု အချိန်တွင် သနပ်ခါး၏ တန်ဖိုးကို အထင်မကြီး အသိအမှတ် မပြုဘဲ ဓာတုဗေဒနှင့် ဖော်စပ် ထားသော အလှပြင် ပစ္စည်းများကိုသာ အထင်ကြီး၍ တန်ဖိုးကြီးကြီး ပေးဝယ်ကာ သုံးနေကြ သည်။
သနပ်ခါးသည် အမွှေးရနံ့ မလွန်ကြူးသော်လည်း သင်းသင်းမွှေးမွှေး ချွေးကလေး တစိုစို အသားအရေအေး ကာ ခံစားမှုကို နှစ်လိုဖွယ်ရာ ပေးလေသည်။ အဆင့်အတန်း မနိမ့်သော မြန်မာ့ရင်းမြစ် သနပ်ခါး စစ်စစ်ဖြစ်သည် ။ မြန်မာ့သနပ်ခါးစစ်စစ်၏ အရသာသည် ပူသည်၊ ခါး သည်၊ အနည်းငယ်စပ်သည်၊ အစာကိုကြေစေသည်၊ လေကိုရစေ သည်၊ သွေးကိုကြွစေသည်၊ အခိုးကိုပွင့်စေသည်။ သွေးသားကို ကြည်လင်စေပြီး အသားအရေကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်း စေသည်။ ငန်းဖမ်းရောဂါကို အထူးနိုင်နင်းသည်။ သနပ်ခါးသည် မြန်မာ့ဝေါဟာရ စစ်စစ်ဖြစ် သည်။ မြန်မာသမားတော်တို့၏ ကြံဆချက်အရ ခန္ဓာကိုယ်ကို သနစေသော (သို့မဟုတ်) ခန္ဓာကိုယ်၏ အညစ်အကြေးတို့ကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ သန့်ရှင်းစေခြင်း တို့ ပြုလုပ်ပေးသည် ။ (သနခါ-သနစေသောအရာတို့ကိုခါထုတ်ပေးသည်)သနပ်ခါး၏ ရုက္ခဗေဒအမည် (Limonia acidissma, Narigi crenulata) ဖြစ်သည်။ သနပ်ခါး၏ အရသာသည် ခါးသည်။ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုသည်။ ခါးသော အရသာသည် အရေထူ အရေ ပြားကို အားဖြည့်ပေးသည်။ ထို့ပြင် သွေးလေကို ညီညွတ်စေ၍ သွေးကို သန့်စင်စေသည်။ သွေးလည်ပတ်မှုကို ထိန်းပေးသည်။ နှလုံးကိုများစွာ အကျိုးပြုသော ဆေးဖက်ဝင် ပစ္စည်းဖြစ် သည်။ မြန်မာ့ ဆေးပညာရှင်တို့ အဆိုအမိန့်အရ သနပ်ခါးသည် အမြစ်၊ ပင်စည်၊ အရွက်၊ အသီးကအစ လူတို့အတွက် လွန်စွာ အသုံးဝင်လေသည်။ အမြစ်-ဝမ်းနုတ်ဆေး၊ ချွေးထုတ် ဆေးတို့ ဖော်စပ်ရာတွင် ထည့်သုံးလေ့ရှိသည်။ နနွင်းမှုန့်နှင့်သွေး၍ သောက်ပေး၊ လိမ်းပေး ပါက မီးယပ်ရောဂါသည်များ သွေးသား မှန်ကန်စေသည်။ သနပ်ခါးအမြစ်ကို ဆားထည့်ပြီး သွေးလိမ်းပါက အညောင်းအညာကို ပျောက်စေသည်။ ကလေးများ အအေးမိ၍ နေထိုင် မကောင်းဖြစ်လျှင် သနပ်ခါး အမြစ်တုံးကိုသွေးပြီး သနပ်ခါးအနှစ်ကို ကွမ်းရွက်စိမ်းရည်နှင့် တိုက်လျှင်ပျောက်သည်။ သနပ်ခါးအမြစ်တုံး ကိုသွေးကာ နေ့စဉ်မှန်မှန် လိမ်းပါက အသား အရေစင်ကြယ်ပြီး မှဲ့ခြောက်၊ တင်းတိပ်၊ ဝက်ခြံဖုထွက်ခြင်းတို့ ပျောက်လေသည်။
အသည်း ရောင် ရောဂါဝေဒနာ စတင် ခံစားနေရချိန်တွင် သနပ်ခါး အမြစ်တုံးကို ဆားနှင့်သွေး ကာ ရေနွေးကြမ်းပန်းကန် တစ်ဝက်ခန့် သောက်ပေးလျှင် သက်သာသည်။ ပင်စည်-သနပ်ခါး၏ ပင်စည် သည် ထွက်ပေါ်လာသော အပွေးအခေါက်ပေါ် မူတည်ကာ တန်ဖိုးရှိလေသည်။ အကိုင်းအခက်၊ အတက်ကအစပင် နှစ်ထပ်ပွေး အခေါက်ထူပါက ကျစ်လျစ်သိပ်သည်း၍ ပိုပြီး ဈေးခေါ်ကောင်းသည်။ ပင်စည်သည် သနပ်ခါး တစ်ပင်လုံးတွင် ရောင်းပန်း အလှဆုံးဖြစ်သည်။ ဝက်ခြံအမာရွတ်ရှိသူများ သနပ်ခါး ကို ပျစ်ပျစ်သွေးပြီး နေ့၊ ည လိမ်းပေးလျှင်ပျောက်သည်။ မိတ်၊ အင်ပျဉ်၊ အသားအရေ ယားယံလျှင်လည်း သနပ်ခါးနှင့်ဆားရောပြီး လိမ်းပေးရသည်။ သနပ်ခါးသည် နေ့စဉ်လိမ်းပေးပါက အသားအရေ ကို ချောမွတ်နူးညံ့စေသည် ။ အရွက်ကို ဝက်ရူးပြန် ရောဂါအတွက် ဆေးဖော်စပ်ရာတွင် ပါဝင်သည်။ အနာကြီး ရောဂါသည်များ အတွက် အရွက်ပြုတ်ရည်ကို ရေချိုး ပြီး ချွေးအောင်းပေး လျှင် ရောဂါ သက်သာ သည် ။ အရွက် ပြုတ်ရည်ကို ဆားခတ်၍ သောက်ပါက ငှက်ဖျားရောဂါကို ပျောက်စေ သည် ။ အရွက်ခြောက်ကို အမှုန့်ပြုပြီး ရေနှင့်သောက်ပါက အဖောအရောင်၊ အနာအဆာတို့ ပျောက်သည်။ အရွက်-သနပ်ခါး(အသီး)ကို အဆိပ်ဖြေဆေး၊ ခွန်အားတိုးဆေး၊ ကျောက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပြင်းထန်သော အဖျားရောဂါဆေးတို့ ဖော်စပ်ရာတွင် ပါဝင် အသုံးပြုသည်။ အသီး-အသီး ပြုတ်ရည်ကို ခပ်နွေးနွေးတွင် ငုံပေးပါက သွားနာခြင်း၊ သွားကိုက်ခြင်းတို့ကို သက်သာစေသည်။
၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ သုတေသီ တစ်စုသည် သနပ်ခါးအခေါက်တွင် ပါဝင်သော ဓာတ်ပစ္စည်း များကို အသေးစိတ် လေ့လာကြရာ သနပ်ခါးတွင် အင်တီအောက်ဆီးဒင့် (ခေါ်) ခန္ဓာကိုယ်အား အကျိုးပြုဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင်ပစ္စည်း တစ်မျိုး ပါဝင်သလို အသားအရေ ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေသည့် ဓာတ်များအပြင် ဗက်တီးရီးယားများ ကို သေစေသည့် ဓာတ်နှင့် အရေပြား အရောင်ကို ပြောင်းလဲဖြစ်စေ သည့် ဟော်မုန်း ထွက်ရှိမှုကို ဟန့်တား ပေးသည့်ဓာတ်များ ပါဝင်နေသည်။ ထို့ပြင် သနပ်ခါးသည် နေပူဒဏ် အပြင် နေလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် အဆင့်မြင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုပါ ကာကွယ်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းများဖြင့် ဖော်စပ် ထားသော အလှပြင် ပစ္စည်းတို့ထက် မြန်မာ့ရိုးရာ သနပ်ခါး ကို ကျောက်ပျဉ် သန့်သန့်လေးမှာသွေးပြီး ရနံ့သင်းသင်း မွှေးမွှေးလေးကို လူးကာ ချွေးလေး တစို စို နှင့် အေးအေးလေး ခံစားရသော အရသာသည် မိန်းကလေးတို့အတွက် သဘာဝ မူပိုင်အလှ သာဖြစ်လေသည် ။
သဘာဝ မဟုတ်သော ခေတ်မီအလှပြင် ပစ္စည်းတို့မှာ သိပ္ပံပညာထွန်းကား လာမှ ပေါ်ပေါက် လာ ကြခြင်းဖြစ်သည် ။ ဆရာကြီး စစ်ကိုင်း ဦးဖိုးသင်း၏ အဆိုအရ လွန်ခဲ့ သောနှစ်ပေါင်း ၂၄ဝဝ ကျော်ကာလ သရေခေတ္တရာ ဗိဿနိုး မိဖုရားတို့ ခေတ်ကာလကတည်း က ရှိခဲ့သည်။ သုပညာပရန္တတိုင်း ကောင်းစားစဉ်က ထိုခေတ်ရှိ အမျိုးသားတို့သည် သနပ်ခါး ကို အသုံးချ၍ လိမ်းခြယ်လေ့ရှိကြောင်း (ဆရာမ ကြီး ဒေါ်စောမုံညင်း ၏ မြန်မာအမျိုးသမီး ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှု)မှ တွေ့ရသည် ။ သနပ်ခါးကို နေ့စဉ်လိမ်းရန် မသွေးနိုင်၊ အချိန်မပေးနိုင်လျှင် အဆင်သင့် ရစေရန် သွေးထားကြသည်။ ထိုအခါတွင် သွေးပြီးသားသနပ်ခါး မပုပ်မသိုး၊ အနံ့ မပျက်စေရန် ထိန်းသိမ်းရာတွင် မြန်မာ့နည်းစနစ်နှင့် ထိန်းသိမ်းကြလေသည်။ ရှောက်ရည်၊ သံပရာရည်များ ထည့်သလို ကျောက်ချဉ်ကိုလည်း အမှုန့်ပြုကာ ထည့်ကြသည်။ သို့မှသာ ကြာရှည်ခံပြီး မပုပ်မသိုးဘဲ သနပ်ခါးကို ရရှိမည်။ အချို့ကမူ ငွေမတ်စေ့လေးများ ထည့်ထား လေသည် ။
သနပ်ခါးသည် မြန်မာ့ရင်းမြစ်အပင် စစ်စစ်ဖြစ်သော်လည်း နံ့သာငါးပါးနှင့် နှိုင်း ယှဉ်ပါက သင်းပျံ့သော ရနံ့ထွက်ကနည်းလေသည်။ ယနေ့ခေတ် သိပ္ပံနည်းပညာ စနစ်ဖြင့် ပါဝင်သောဓာတ်ကို လေ့လာသော အခါတွင် ကူမာရင်ဓာတ်က အဓိကပါဝင်သည် ။ သနပ်ခါး သည် မြန်မာမိန်းကလေးမှန်လျှင် အလှပြင် ပစ္စည်းအဖြစ်နှင့် သာမက ကျန်းမာရေး အတွက်ပါ လိမ်းရန် ဆောင်ထားသင့်သော ပစ္စည်းအ မှန်ဖြစ်လေသည် ။ အမျိုးမျိုးသုံးစွဲ၍ ရသောကြောင့် သနပ်ခါးတုံးလေးသည် မှော်ဝင်ပစ္စည်း၊ မှော်နှင် တံလေးနှင့် တူလေသည်မို့ ''မှော်နှင်တံအလား သနပ်ခါး''ဟူ၍ပင် တင်စား လိုက်ချင်ပါတော့သည်။
သင်သည် တစ်နေ့လုံး ဗိုက်ဆာနေလျှင်
တချို့လူတွေက ကိုယ်အလေးချိန်တက်မှာ စိုးရိမ်နေပေမယ့် တစ်နေ့လုံးမကြာခဏ ဆာလောင်တဲ့ ဝေဒနာ ကို ခံစားနေရ တတ်ပါတယ် ။
ဒါဟာ အစာစားနည်းပုံစံမမှန်တာကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် တစ်နေ့လုံး ဗိုက်ဆာ နေသူတွေ စားသင့်တဲ့ အစာစားနည်းပုံစံကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
အစာကို နည်းနည်းနဲ့ ပုံမှန်စားပေးတာဟာ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းကို အစာချေဖျက်ဖို့ အချိန်ပေးတဲ့ အတွက်ကောင်းတဲ့ အလေ့အထဖြစ်ပါတယ် ။
တချို့လူတွေမှာ ထမင်းအနပ်ကြီးမစားဘဲ ထမင်းနည်းနည်းကို ငါးကြိမ်လောက် ခွဲပြီး စားတာတောင် ဆာလောင်မှုကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို လူတွေအတွက် ထမင်း တစ်နပ်နဲ့ တစ်နပ်ကြား အဆာပြေ သရေစာ အနည်းငယ် စားပေးဖို့ အကြံပေးပါရစေ။
သရေစာစားတဲ့ အခါမှာတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အခွံမာသီး၊ အစေ့အဆန်၊ လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီး၊ အဆီနည်းဒိန်ချဉ် စတာတွေကိုပဲ ရွေးချယ်စားပေးပါ။
အစာအိမ်ထဲမှာ ကြာကြာရှိနေပြီး ဗိုက်ဆာလွယ်တာမျိုး မဖြစ်အောင် စားသင့်တဲ့အစား အသောက်တွေက အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအသောက်တွေနဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်တဲ့ အစား အသောက်တွေ ဖြစ်ပါတယ် ။
နံနက်စာမှာ ကွေကာ (Cereal) နဲ့ ကောက်နှံတစ်ခုလုံးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေ ပါဝင်အောင် စားပါ။
ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ အစာလျှော့စားနေပါက ကြာရှည်ဗိုက်နာခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် အလွန်အမင်း လျော့ကျသွားခြင်း စတာတို့ ခံစားရရင် ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ပဒိုင်း ( Datura stramoniumLinn) ပဒိုင်းဆိုတာနဲ့ရှုးတာကိုဘဲ မသိကြပါနဲ့အစွမ်းတွေကိုသိစေချင်လို့ ပါ
မြန်မာ ဆေးကျမ်း များ အလိုအရ ပဒိုင်းညို သည် ခါး၏။ သက်၏။ စူးရှ၏။ ပူ၏။ အားကို တိုးစေ၏။ မူးယစ်စေ တတ်၏။ အဖျား ရောဂါ ကို ပယ်၏။ နူနာ၊ ပိုးနာ တို့ကို နိုင်၏။ သန်ကို ကျစေ၏။ ကိုယ်ရေ ပြားရောဂါ၊ မြင်းသရိုက်နာ၊ အဆုတ်ပွ ရောင်နာတို့ကို ပယ်၏။ လေကို အထူး ပယ်နိုင်၏။ အသုံးပြုပုံ - အရွက် ကြိတ်ညှစ်ရည် အနည်းငယ် ကို မလိုင်ထုတ် ပြီး နွားနို့နှင့် သောက်ပါက ညောင်းကျ ရောဂါ ပျောက်၏။ မိန်းမများ နို့တွင် ဖြစ်သော အပူကြိတ် နှင့် ရောင်ရမ်းခြင်း တို့အတွက် ပဒိုင်းရွက် နှင့် နနွင်းကို ကြိတ်အုံ ပေးသော် ပျောက်၏။
ပဒိုင်းရွက် ကို ပါးပါး လှီး နေလှန်းပြီး ဆေးလိပ် ကဲ့သို့ လိပ်၍ သောက်ရှူ သော် လတ်တလော ပန်းနာ ရင်ကျပ် ဝေဒနာမှ သက်သာ စေ၏။ အရွက် ကို မီးကင်၍ ကပ်ပေး ပါက အဆစ်ရောင် ရောဂါ နှင့် အရိုးကိုက် ရောဂါ ပျောက်၏။ အရွက် ကို ဆေးပေါ့လိပ် တွင် ထည့်၍ သောက်ခြင်း အားဖြင့် ပန်းနာ ရောဂါကို သက်သာ စေသည်။ အစေ့ကို ကြိတ်၍ သွားဖုံးရင်း တွင် အနည်းငယ် ခန့် သိပ်ပေးသော် သွားကိုက်၊ သွားနာခြင်း ရောဂါများ ပျောက်၏။ အစေ့ သို့မဟုတ် အမြစ် ကို ကာမ အားတိုးဆေး အဖြစ် သုံး၏။
အစေ့မှုန့် ကို နှမ်းဆီ တွင်၇ ရက် စိမ်ပြီး ယင်းဆီဖြင့် ခေါင်းကိုက်၊ မျက်ရိုးကိုက်၊ ခါးကိုက်၊ဒူလာ ခြေနာ များကို သုတ်လိမ်း၍ အ၀တ်ပါးပါး စည်းထားက ပျောက်၏။ ဓမ္မတာ လာစဉ် ကိုက်ခဲခြင်း အတွက် လည်း ဆီးခုံ၌ သုတ်လိမ်း ပေးခြင်းဖြင့် ပျောက်၏။
အမြစ် - ခွေးရူးပြန် ရောဂါအတွက် ပဒိုင်းမြစ် ကို ဆန်ဆေးရည် နှင့် သွေး၍ တိုက်ပြီး အမဲခြောက် ဖုတ် ကျွေးက ပျောက်၏။
နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ အဖျား၊ အစာမကြေ လေနာ၊ အရေပြား ရောဂါ၊ မြွေကိုက်ခြင်း တို့ကို ကုသရာ၌ အမြစ်ကို သုံးသည်။ နားပြည်ယို၊ နားကိုက် ရောဂါကို ဖလံတောင်ဝှေး အခွံ့နွှာ မီးကင်ပြီး အတန်ကြာ အေးစေ၍ ရည်ညှစ်ယူ ၎င်းအရည်ကို နားအတွင်းသို့ ၃-၄ စက်ခန့် မကြာ မကြာ ထည့်ပေးရ၏။ ချောင်းဆိုး ရောဂါ၊ သာမာန် နှလုံးတုန် ရောဂါ တို့ကို ဖလှံတောင်ဝှေး ဟင်းချက် စားခြင်း၊ နှမ်းဆီ စစ်စစ်ဖြင့် ကြော်စားခြင်း တို့ဖြင့် သက်သာ စေနိုင်သည်။ ဒူလာရောဂါကို ဖလှံတောင်ဝှေး သုံးခွက် တစ်ခွက်တင်ကို သောက်လျှင် ပျောက်၏။